Maitiro ekushandura mapikicha muHEIF fomati kune echinyakare mafomati senge JPEG | IPhone nhau
Maitiro ekushandura mapikicha muHEIF fomati kune echinyakare mafomati senge JPEG
Iyo itsva HEIF fomati mune ayo mapikicha kubva kuCupertino mafoni senge iyo iPhone yakachengetedzwa inotungamira kune kumwe kusapindirana pane mamwe maWindows makomputa, kunyangwe mune zvimwe zviitiko zvakare nemacOS uye Apple zvigadzirwa. Isu tinotsanangura kuti unogona sei kuona, kubata uye kushandura mapikicha muHEIF fomati kune echinyakare mafomati senge JPEG.
Gara nesu mune ino nyowani uye yakapusa iPhone Nhau dzidzo maunogona kuita chero chaunoda nemifananidzo kana mafaera mukati HEIF de nekukurumidza uye nyore.
1 Ndeipi iyo HEIF fomati?
2 Ndingaite sei kuti ndirege kuchengeta zvemukati mune HEIF fomati?
3 Chinja HEIF kuJPEG pamhepo
4 Chinja HEIF kuJPEG nezvirongwa
5 Maitiro ekutamba maHEIF / HEVC mafaera kubva kuApple
Ndeipi iyo HEIF fomati?
Kuti udzikise saizi yemafaira, zvimwe zvishandiso zvakaita sePhones zvinokutendera kuti uchengetedze mafoto mune yakanyatsoshanda HEIF / HEVC fomati. Iyo zvakare fomati iyo inokutendera iwe kuti uchengete vhidhiyo uye iri kupa mibairo yakanaka kwazvo maererano nekomputa uye kutamba. Iyo inopesana neyechinyakare JPEG fomati ine H.264 codec, zvisinei, isu tinogona chete kuchengeta vhidhiyo mu4K pa60 FPS kana 1080p pa240 FPS (yemhando yepamusoro yakapihwa neiyo iPhone X kamera) mune yepamusoro-inoshanda fomati HEIF.
Mamirioni evashandisi atove kutora mukana weiyi yekuchengetera nzira kubva pakauya iOS 12 uye kunyanya kubva kuMacOS Sierra, sisitimu inoshandiswa zvakanyanya nevakagadziri uye vagadziri ve audiovisual zvemukati. Iyi nyowani yekumanikidza codec Iyo inokwanisa kudzikisa ne50% iyo nzvimbo iyo vhidhiyo yakanyorwa pane 4K resolution inogara mundangariro, iyo inounza mabhenefiti muhupfumi hweyeuchidzo yemukati.
Ndingaite sei kuti ndirege kuchengeta zvemukati mune HEIF fomati?
Iyo iPhone inotipa mukana wekugadzirisa mafomati api atinosarudza kana tichichengeta zvemukati, nekumisikidza zvinoita kunge zvakagadziriswa mu "yakanyanya kushanda" HEIF codec, saka isu tinofanirwa kutevedzera inotevera rairo kana chatiri kuda ndechekuchengeta mafaera mune akajairwa JPEG / H.264 fomati uye nekudaro tikwanise kuzviburitsa pane chishandiso chatinoda pasina kuunza matambudziko akawandisa.
Vhura iyo application Zvirongwa yeyako iPhone
Enda kuchikamu Camera mukati mesarudzo
Sarudza sarudzo Formats mukati megadziriro yekamera muIOS
Iyo fomati inoratidzwa Kubudirira zvakanyanya inova HEIF / HEVC fomati, uye yechipiri sarudzo iri Inonyanya kuenderanai.e. yakajairwa JPEG / H.264
Kana tikabaya Inonyanya kuenderana isu ticharega kushandisa yakadzvanywa HEIF fomati uye isu hatizove nematambudziko kugadzirisa kana kutamba iyi mhando yezvinyorwa
Zviri nyore ndiwo maitiro atinogona kumisikidza iyo iPhone kuti imire kuchengetedza zvirimo mune yakanyatsoshanda HEIF / HEVC fomati kunyangwe ndangariro yedu ichatambura mhedzisiro.
Chinja HEIF kuJPEG pamhepo
Sarudzo yekutanga ndiyo yakajairika uye yakapusa, haidi chero rudzi rweimwe software yekuwedzera, isu tinofanirwa kungova mumaoko edu iyo HEIF faira yatichachinja uye tiende kunotevera. LINK matiri kuwana webhusaiti inotibvumidza nekukurumidza shandura HEIF kana HEIC fomati yakananga kuJPEG pasina dambudziko rakawandisa, iyo faira inongoiswa paserura yako uye ichatitendera kuti tiitore asi muJPEG fomati.
Iyi nzira ndiyo inokurumidza, sezvatareva, asi Izvo zvinongowanikwa chete kana isu tine internet yekubatanidza, uye kana iyo faira iri yakakura kwazvo tichava nematambudziko, saka zvingave zviri nani kutsvaga dzimwe nzira dzisingade internet yekubatanidza.
Chinja HEIF kuJPEG nezvirongwa
Pane zvimwe zvirongwa pamusika zvinotibvumidza kuita rudzi urwu rwekutendeuka, zvakajairika kuwana mafemu esoftware ayo akatsaurirwa chaizvo kugadzirisa matambudziko aya pasina chikonzero chekutarisa kune yakawanda yekugadzirisa kana kutambisa nguva yakawandisa. . Muenzaniso ndewe iMazing HEIC Shanduro, sisitimu inotibvumidza isu kuisa chishandiso pane ese Windows uye Mac izvo zvinotibvumidza isu kuendesa edu maHEIF kana HEIC mafaera uye nekushandura iwo akananga kuJPEG kana JPG.
Unogona kurodha chishandiso chemahara pa IZVI ZVINONZI kuiyedza. Nekudaro, isu tinokuyeuchidza iwe kuti ndeye software iyo inopa yemahara kuyedza, saka isu hatizokwanise kuishandisa pese patinoda, kana tichida chirongwa isu tichafanirwa kuitora nenzira yakajairwa nzira.
Maitiro ekutamba maHEIF / HEVC mafaera kubva kuApple
Android ingangoita isingagumi renji yemikana, saka zvingave sei neimwe nzira, isu tinogona kutamba zvemukati neiyo nyowani HEIF / HEVC fomati zvakananga nechishandiso luma, iyo iwe yaunogona kurodha pasi pa IZVI ZVINONZI kurumidza uye kumisikidza se .APK. Aya ndiwo ese mikana yatinayo yekuzvara, kushandura uye kushandura chero mhando yeakajeka faira rakanyorwa ne iPhone pasina yakawandisa dambudziko.
Senguva dzose, Kana iwe uine mazano akanaka kana dzimwe nzira dzinonakidza, usazeze kuisiya mune yemazita runyorwa saka isu tinogona kukubatsira iwe nekukurumidza uye nyore nyore kugadzirisa ako matambudziko neepamusoro-anoshanda HEIF fomati iyo Apple yakatangisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekushandura mapikicha muHEIF fomati kune echinyakare mafomati senge JPEG
Inhau yeGerman inoburitsa mitengo yepamutemo mumaeuro eiyo matsva maX Xs
Podcast 10x1: Kumirira Keynote